भारतले नेपालमा हस्तक्षेपमा गर्नुमा यहाँका राजनीति दल कम दोषी छैन | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » भारतले नेपालमा हस्तक्षेपमा गर्नुमा यहाँका राजनीति दल कम दोषी छैन
भारतले नेपालमा हस्तक्षेपमा गर्नुमा यहाँका राजनीति दल कम दोषी छैन
SAHARA TIMES Saturday, March 4, 20170No comments
–डा.प्रमोद जयसवाल, रिसर्चर
महोत्तरी रामगोपालपुरका ३५ वर्षीया डा.प्रमोद जयसवाल ११ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आउनु भएको छ । उहाँले जवाहरलाल नेहरु कलेजबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध नेपाल र चीनको विषयमा पीडएडी गर्नुभएको छ । हाल दिल्लीको इन्स्टिच्युट अफ पीस एण्ड कन्फिलिक्ट स्टडीजका सिनियर फेलो (रिसर्चर) को रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । भारतका बुद्धिजिवी, पत्रकार र राजनीतिक दलसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु भएका डा.जयसवाल नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ, भारतमा रहनु भएका उहाँसँग सहारा टाइम्सले फोनमा गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
तपाई ११ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आउनु भएको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, अहिलेको नेपाल र भारतको सम्बन्धनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाल भारतको सम्बन्ध अद्भुत छ । खुल्ला सिमानाका कारण दुई देशको सम्बन्ध झनै बलियो भएको छ । भाषा, काला सँस्कृति, रहनसहन भेषभुषा सबैसँग नेपाल र भारतको सम्बन्ध रहेको छ । यस्तो सम्बन्ध विश्वमा धेरै कम ठाउँमा पाइन्छ जो नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध छ । म ११ वर्षदेखि भारतमा बसिरहेको छु । नेपाल र भारतको सम्बन्धको बारेमा धेरै मान्छेलाई थाह छैन जस्तो लाग्छ । दुई देशबीच सम्बन्धको बारेमा जो कोहीले पनि बोलिरहेका हुन्छन् । तर दुई देशको बीचमा जुन राजनीति, कुटनीतिक सम्बन्ध छ त्यसको बारेमा सही कुरा कसैले बोलिरहेका हुँदैन । अर्को कुरा दुई देशबीचको सम्बन्धको बारेमा गहिरो अध्यययन भएकै छैन । सबैले सुनि सुनाउन, बनि बनाउ कुरा मात्र बोलिरहेका हुन्छन् । बोलेका कुराहरु यथार्थभन्दा धेरै टाढा हुन्छ । र, पछिल्लो समय जसरी दुई देशको बीचमा जुन निराशा आएको छ त्यो सब यसै कारणले आएको छ । दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई आआफ्नो तरिकाले व्याख्या छन् ।
तपाईले नेपाल र भारतको सम्बन्ध अदभुत रहेको भन्नुभयो, कला, सँस्कृति, भेषभुषाको स्तरसम्म दुई देशबीचको सम्बन्ध रहेको छ भन्नुभयो तर यहाँ नेपालमा अहिले पुरै एन्टी इण्डियन मुभमेन्ट चलिरहेको छ
–नेपालमा भारतको बारेमा जस्तो देखिन्छ त्यस्तो छैन । नेपालको जुन एलिट गु्रप छ, जोसँग मिडिया, पोल्टिक्स सबै छन् उनीहरुले यस्तो गतिविधि गरिरहेका छन् । उनीहरुले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धको बारेमा एन्टी कुरा गरिरहेका छन् तर जो पिडित समूह छन्, पिछडिएका छन्, जो विभेदमा परेका छन् उनीहरुले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बलियो होस् भनि चाहेका छन् । र उसले जहिले जतिखेर पनि नेपालको सम्बन्धको बारेमा राम्रो सोचेका हुन्छन् । तपाई मधेशीलाई सोध्नुस् कि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कुनै निराशा आएको छ अनि उसको जवाफ हुन्छ होइन । हो, नेपालको एलिट क्लाश जो भारतसँग चिढिएका छन् र उसले नै यस्तो प्रोपगण्डा फैलाई रहेका छन् ।
–मेरा विचारमा उनीहरुले यस्तो विरोध गर्नुको पछाडी ब्ल्याकमेलिङ्को नियत रहेको देखिन्छ । उनीहरुले भारतसँग केही चाहिरहेका हुन्छन्, केही प्राप्त गर्ने मकसद हुन्छ तर भारतले पूरा गरिरहेका हुँदैन । त्यही भएर त्यसको विरोध गर्दै त्यो प्राप्त गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । तपाईलाई थाह छ नेपालको सविधानलाई भारतले अझैसम्म स्वागत गरेको छैन । त्यही कारणले यहाँका केही एलिट ग्रुपहरु नाराज छन् ।
उहाँहरु (एलिट ग्रुप) ले भारतबाट के चाहन्छन् ?
–भारतले भनेको छ कि मधेशको समस्या समाधान गर्नुस्, यदि यो समस्या चाँडै समाधान भएन भने हाम्रो देशको सुरक्षामा असर पर्छ । भारतले यस्तो किन भन्छन् भने भारत र नेपालका सिमान एक आपसमा जोडिएका छन् जुन भाग मधेशमा पर्छ । नेपालका भूभाग मधेश जुन भारतको सिमासँग जोडिएको छ । त्यो मधेशमा यदि अशान्ति भयो, आन्दोलन भइरह्यो भने भारतलाई असर गर्छ भने कुरा भारतको बुझाई हो र यसले भारत निकै चिन्तित देखिन्छ । त्यसैले भारतले यसलाई चाँडो समाधान गर्न भनिरहेको छ जो नेपालका एलिट ग्रुपलाई पचिरहेको छैन । उनीहरु भन्छन् भारतले मधेशलाई सहयोग गर्यो । नेपालका एलिट ग्रुपलाई लाग्छ कि भारतले मधेशलाई उक्साई रहेको छ ।
तर भारतबाट एलिट ग्रुपले जति फाइदा लिरहेका छन् त्यति फाइदा त मधेशले लिइरहेका छैन त किन त्यस्तो ?
–हो, यो विल्कुल सही हो । भारतले पनि जहिले पनि सत्तापक्षलाई नै चाहेका हुन्छन् । सत्ता पक्षसँग मात्र नजिक हुन्छ । भारतले मधेशीलाई सहयोग गर्यो भन्नु एकदम गलत हो । भारतलाई अरु केही होइन, आफ्नो देशको सुरक्षाको चिन्ता छ जो नेपालको सीमासँग जोडिएको छ । भारतले चाहन्छ कि सविधानमा मधेशको समस्या समाधान होस्, मधेशको समस्या समाधान भयो भने सिमा क्षेत्र शान्त रहन्छ । सत्तामा रहेका एलिट ग्रुप भनौ वा ठूला दल उनीहरुले भारतको स्वार्थ पूरा गरिरहेका हुन्छन् । भारतले जे चाहेका हुन्छन् त्यो पुरा गरिरहेका हुन्छ तर मधेशीले भारतको कुनै इच्छा पूरा गर्न सक्दैन किनभने मधेशी कहिले पनि सत्तामा पुगेको छैन । फेरि भन्नुहुन्छ, पटक पटक सत्तामा गएकै हो । त्यो होइन, सत्तामा जानु मन्त्री बन्नु एउटा कुरा हो, सत्ताको नेतृत्व गर्नु अर्को कुरा हो । मधेशी दल सत्तामा गए पनि सत्ताको नेतृत्व कहिल्यै गरेनन् । त्यसैले भारत पनि मधेशी भन्दा बढी उनीहरुसँग नै बढी हिमचिम बढाएका हुन्छन् । मधेशीलाई भारतको संस्थापन पक्षसँग सम्बन्ध छैन, अर्थात दिल्लीसँग सम्बन्ध छैन तर भारतीय जनतासँग राम्रो सम्बन्ध छ । मधेशी दलको भारतीय सत्ता पक्षसँग सम्बन्ध छैन, भारतीय सत्ताको नेपाली सत्तापक्षसँग मात्र सम्बन्ध छ । त्यसैले यी दुवै पक्ष एक आपसमा सुविधा सेयर गरिरहेका हुन्छ ।
त्यसो भए मधेशी दल भारतको सत्तापक्ष माथि किन यस्तो ‘फिदा’ छन् त ?
–नेपालको राजनीतिकमा भारत एउटा अभिन्न अंग हो । नेपालको राजनीति आफ्नो अनुकुल होस् भनि चाहिरहेका हुन्छ किनभने त्यस अनुसारको उसको पहुँच छ । नेपालमा भारतको जुन प्रकारको कुटनीतिक गतिविधि छ त्यसले गर्दा मधेशी दल पनि चाहन्छ कि हामी पनि भारतको नजिक रह्यौं भने केही पाउँछौ तर त्यो भइरहेको छैन ।
–हेर्नुस्, भारतले जोसँग नजिक वा टाढा छ आफ्नो देशको हित अनुकुल नै छ । जोसँग भारतको हित हुन्छ, जोसँग फाइदा हुन्छ उसैको नजिक बस्छ, यो हुम्यान नेचर पनि हो । भारत मधेशको साथ रह्यो भने भारतलाई कति फाइदा हुन्छ, यहाँका सात्ता पक्षसँग रह्यो भने कति फाइदा हुन्छ त्यसको हिसाब किताब पनि गरेर बसिरहेका छन् । त्यसै अनुसार विदेश नीति बनाएका हुन्छन् । मेरो विचारमा अरुसँग सम्बन्ध बनाउनका लागि आफू पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, बराबरको हैसियता भएपछि मात्र कसैले कसैसँग मित्रताको हात अगाडि बढाउँछ । मधेशी समुदायको भारतीय समुदायसँग जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध पहाडी समुदाय (जो सत्ताको नजिक छ) सँग छैन । अर्थात मैले भन्न खोजेको हो कि सम्बन्ध पनि आफ्नो बराबरीमा हुन्छ जो मधेशसँग छैन । भारतसँग नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीले फाइदा लिएका छन् त्यति मधेशवादी दलले लिएका छैन किनभने ती दलहरु जहिले पनि सत्तामा रहे त्यसैले भारतसँग नजिक रहेर फाइदा लिए । जुन दिन मधेशी दल सत्ताको नेतृत्वमा पुग्छन् त्यो दिन उसले पनि भारतसँग फाइदा लिन्छ ।
अहिले भारत मधेशका लागि चिन्तित देखिन्छ त्यो के हो ?
–मधेशले अधिकार पायोस् भने चिन्ता भन्दा पनि भारतले मधेशको समस्या कसरी समाधान हुन्छ त्यसमा चिन्तित देखिन्छ । मधेशको समस्या जसरी समाधान हुन्छ गर्नुस् भनिरहेका छन् भारतले । झुठो बोलेर होस् वा झुक्याएर होस्, आश्वासन दिएर होस् कसरी हुन्छ मधेशको समस्या समाधान गर्न भनिरहेको छ, मधेशको अधिकारसँग, हकसँग भारतको कुनै मतलब छैन । उसलाई मतलब छ भने आफ्नो देशको सुरक्षासँग जो मधेशसँग जोडिएको छ ।
भनिन्छ, कि नेपालमा भारतको निकै हस्तक्षेप रहेको छ, हरेक क्षेत्रमा आफ्नो दवदवा बनाएको छ के यो सही हो ?
–भारतका लागि नेपाल धेरै महत्वपूर्ण देश हो । नेपालमाथि भारतले जति ध्यान दिनुपर्ने त्यति दिइरहेका छैन । नेपाल र भारको बीचमा पोल्टिकल लेवलमा त्यति धेरै चर्चा हुँदैन । नेपाल भारतको सम्बन्ध कर्मचारीतन्त्रको आधारमा आगाडि बढी रहेको छ । कर्मचारीले गर्ने निर्णय कुनै सही पनि हुनसक्छ कुनै गलत पनि हुनसक्छ । कुनै देशको हितमा पनि हुनसक्छ कुनै अहितमा पनि हुनसक्छ । भारतले नेपालको हितमै सबै कुरा गरिरहेका हुन्छन् तर कर्मचारीतन्त्रको निर्णयले गर्दा कहिले काही अहितमा निर्णय हुनपुग्छ । म पनि सुनेको छु कि भारतले कहिले काही ज्यादै हस्तक्षेप गरेको हुन्छ । तर, यसमा म भारतलाई दोषी देख्दिन । यसमा नेपालको ब्यूरोक्राइटस र पोल्टिकल नै दोषी हो । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले नै भारतलाई हस्तक्षेप गर्ने मौका दिइरहेका हुन्छन् । तपाईले ढोका खुल्लै राखेपछि त्यहाँ त जो कोही पनि पस्नसक्छ नि । भारत यति ठूलो देश हो, उसको यति पहुँच छ कि नेपालका सेना, ब्यूराक्राइटस्, पत्रकार, राजनीतिक दलसँग कनेक्टिभिटी बनाएको हुन्छ । त्यसले गर्दा भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ तर त्यस्तो होइन । यदि भारतले चाहे भने नेपालमा जे पनि हुन्छ तर त्यस्तो छैन । भारतले नेपालमा जे गरेका हुन्छन् त्यो नेपालको हितमा नै गरेका हुन्छ । कहिले काही मिस कम्युनिकेशनले गर्दा समस्या देखिन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर भारतको बारेमा मान्छे जति हल्ला गरेका छन् त्यो गलत हो । म त भन्छु, नेपालको बारेमा सोच्ने फुर्सद भारतसँग छैन । भारत नेपालमा चीनका कारण धेरै चिन्तत हुन्छ । भारतलाई लाग्छ कि चीनले नेपालमा आफ्नो गतिविधि नबढाओस् ।
सिके राउतको बारेमा भारतले के सोचिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–भारतका लागि यो धेरै मामुली कुरा हो । नेपालमा सिके राउतले यतिका गतिविधिहरु गरिरहेका छन् सायदै भारतले याद गरिरहेका छन् । सिके राउत अहिले पक्राउ परेका छन् तर सायद मलाई लाग्छ भारतलाई यो कुराको जानकारी पनि छैन होला । मलाई पनि लाग्दैन कि सिके राउतले नेपालबाट मधेशलाई अलग गर्न सक्छ, अलग देश बनाउन सक्छ । एकजना व्यक्तिको विचारलाई लिएर यति सारो चिन्तित हुने अवस्था छैन । मलाई लाग्छ भारतले कुनै मतलब राखेको छैन । भारतको लागि यो इशु होइन ।
वर्तमान अवस्थामा भारतले पहिले सविधान संशोधन होस् त्यसपछि चुनाव होस् भनि चाहेका छन् यस्तो किन ?
–म पनि यो कुरा पढेको र सुनेको हुँ तर भारतले यो भन्दैन कि पहिलो सविधान संशोधन होस् अनि मात्र चुनाव । तर भारतको चिन्ता अवश्य यो हो कि मधेशको समस्या समाधान होस् जो सविधान संशोधनबाट मात्र सम्भव छ । तर मलाई के लाग्छ भने जबसम्म सविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म चुनाव हुँदैन । समस्याको समाधान चुनावले मात्र हुँदैन । यदि चुनावले समस्याको समाधान भएको भए दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी चुनाव हुने गर्छन् । यतिखेर दक्षिण एसियाका देशमा समस्याहरु त नहुनुपर्ने हो । त्यसैले चुनावमा समस्याको समाधान खोज्नु गलत हो, समाधान सविधान संशोधनले मात्र सम्भव छ ।
अहिले एमाले राष्ट्रवादीको नारा दिएर भारतको विरुद्धमा किन उभिएको जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–नेताहरुमा सबभन्दा बढी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै दिल्ली जानुहुन्थ्यो । भारतसँग उहाँको राम्रो दोस्ती थियो । तर, जब सत्तामा जानु भयो त्यसपछि भारतसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध रहेन । उहाँको आरोप छ कि भारत सरकारले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेनन् । भारतले आफ्नो देशको शान्ति सुरक्षाका लागि मधेशको समस्या समाधान गर्न केपी ओलीलाई भनेका थिए । मधेशका केही कुरालाई सविधानमा समावेश गर्न भनेका थिए तर ओलीले मान्नु भएन । बरु ओलीले मेधशलाई भड्काउने र उत्तेजित पार्ने काम गर्नुभयो । नाकाबन्दीको समयमा ओली सरकारले भारतसँग सहयोग मागेको थियो कि भारत नेपालको बोर्डरमा बसेका मधेशीलाई प्रहरी सेना लगाएर हटाइ दिनुस् तर भारतले मानेका थिएन त्यस कारणले पनि ओली भारतसँग यति धेरै चिढिएका हुन् र उहाँलाई लागेको छ कि भारतले नै नेपालमा नाकाबन्दी गरेका हुन् । मधेशीहरु बोर्डरका बसिन्दा हुन् आज उनीहरुलाई सेना, प्रहरी लगाएर नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्यो भने भोली गएर आफ्नै देशका लागि खतरा हुने भएकाले भारतले त्यो नचाहेकै हो । भारतले त्यसमा आफूलाई इन्भल्व गर्न चाहदैन्थे ।
तपाई चीन र नेपालबीचको सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ, नेपाल भारतको यो सम्बन्धमा चीनले के चाहेका छन् तपाईले के अध्ययन गर्नुभएको छ ?
–चीनले पनि नेपालमा शान्ति नै चाहेको छ । नेपालमा धेरै तिबतियनहरु शरणार्थीको रुपमा बसिरहेको छ त्यसले गर्दा चीनलाई समस्या भएको छ । भारतलाई नेपालमा धेरै इन्ट्रेस्ट छ तर चीनलाई नेपालमा एउटै इन्ट्रेस्ट छ त्यो हो तिब्बत । त्यसैले नेपाल कसरी शान्त रहोस् जसले चीनमा असर नगरोस् । नेपाल र भारतको छुट्टै सम्बन्ध छ भने कुरा चीनले पनि बुझेको छ । चीनले नेपालमा आएर भारतलाई चिढाउन चाहेका छैन । त्यो चीनका लागि पनि खतरा हुनसक्छ । चीनका लागि भारत आवश्यक देश हो । चीन र भारतबीचको सम्बन्ध अगाडि बढ्दैछ । चीनले नेपालको कारण त्यो सम्बन्धलाई बिगार्न चाहेका छैन । वन बेल्ट वन रोडको अवधारणा भारतसँग मिलेर अगाडि बढाउन चीन चाहेका छन् ।
तर भारत त नेपालमा चीनलाई लिएर धेरै चिन्तित देखिन्छ कि नेपालमा चीनले गतिविधि नबढाओस्, बोर्डरसम्म नपुगोस्, त्यस्तो हो त ?
–हो भारतको तर्फबाट चिन्ता अलि बढी नै छ । भारत र चीनबीच युद्ध भइसकेको छ । अहिले चीन धेरै अगाडि बढी सकेको छ । आर्थिक वृद्धिदेखि लिएर सुरक्षाको स्तरमा पनि धेरै अगाडि बढीसकेको छ चीन । खुल्ला बोर्डरका कारण भारत चीनका लागि चिन्तित देखिन्छ । तर चीनले भारतलाई चिढाउन चाहदैन । चीन यति अगाडि बढीसकेको छ कि यदि नेपालमा भारत विरुद्ध कुनै गतिविधि गर्न चाह्यो भने यहाँ जे पनि हुनसक्छ तर नेपालमा गर्ने गतिविधिले भारतलाई कुनै असर नहोस् भने कुरामा चीन सचेत रहेको पाइएको छ ।
तपाईलाई के लाग्छ चीनको गतिविधि नेपालमा बढेको हो त ?
–हो, बढेको हो । चीनले नेपालमा दिन दिनै आफ्नो गतिविध बढाइरहेका छन् तर त्यो गलत नियतले होइन । चीनले जसरी जसरी प्रगति गरिरहेका छन् त्यसरी नै नेपाल लगायत अन्य देशहरुमा आफ्नो गतिविधि बढाईरहेका छन् । भारतले पनि नेपाल लगायत विभिन्न देशमा आफ्नो गतिविधि बढाएका छन् अर्थात समयको माग अनुसार दुवै देश अगाडि बढीरहेको छ ।